घर ज्वाईं बस्ने रहर पलाएपछि ……. « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
घर ज्वाईं बस्ने रहर पलाएपछि …….
काठमाडौं, २५ जेठ । सृजना नामकी ३५ बर्षिया अँधवैंशे युवतीले बिहेका लागि केटो चाहिएको भन्दै उमेर र आम्दानीका स्रोत खुलाएर पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेकी थिइन् । एक चलेको दैनिक पत्रिकाको वर्गिकृत विज्ञापनमा उनको सम्पर्क नम्बर पनि थियो । र अफर थियो– काठमाडौंको कुनै ठाउँमा १ रोपनी जग्गामा बनेको घर र नगद एक करोड समेत चलाउन पाउने ।
जस्तो ‘घर ज्वाईं राख्न चाहनुहुनेले सम्पर्क……’ तर यो विज्ञापन घर ज्वाईं राख्न चाहनेले छापेको होइन, घर ज्वाईं बस्न चाहने पुरुषले चाहिँ छापेको हो । ‘मेरो दाई पर्ने मान्छेलाई घर ज्वाईं राख्न यो विज्ञापन छाप्नुपरेको हो’ सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्दा आफूलाई रमेश पोखरेल भन्ने व्यक्तिले प्रतिक्रिया दिए ।
उनका अनुसार काभ्रेका ४० वर्षीय विकास थापा क्षेत्री अहिले काठमाडौंमा बस्छन् । उनको यसअघि नै विवाह भैसकेको हो । तर श्रीमती अर्कैसँग गइन् । छोराछोरी पनि श्रीमतीसँगै हिँडे ।
‘श्रीमतीले छाडेपछि उनलाई घरमा गएर बस्न मन छैन, त्यसैले घर ज्वाईं बस्न खोजेका हुन्’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म ६/७ जनाले सम्पर्क त गरेका छन् । तर घर ज्वाईं राख्छु चाहिँ भनेका छैनन् ।’
यस्तै खालको अर्को विज्ञापन पनि पत्रिकामा छापिएको छ । ‘घर ज्वाईंको लागि केटीहरुले सिधा सम्पर्क’ लेखिएको नम्बरमा फोन गर्दा चाहिँ फोन नै सम्पर्क हुन सकेन ।